လက်ကား KD-LC-8N စက်ရုံစျေးနှုန်း အိတ်ဆောင်လက်တွေ့ဘဝတွင် လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက် Cast ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
KD-3DVC-6M မျက်နှာပြင်အပြည့် P...
1 –4ခု $10,049.00 KD-3DVC- ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ
KD-C25SRT စက်ရုံတိုက်ရိုက် sa...
1 –9Pieces $2,370.00 KD-C25SR အော်ဒါမှာယူရန် နှိပ်ပါ...
1 –4ခု $11,353.00 KD-LC-16 ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ...
KD-LC-8N စက်ရုံစျေးနှုန်း ဆိပ်ကမ်း...
1 –4Pieces $5015.00 KD-LC-8N o...
KD-LC-8M Professional တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု...
1 –4Pieces $14,455.00 KD-LC-8M ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ...
KD-LC-8N စက်ရုံစျေးနှုန်း အိတ်ဆောင်လက်တွေ့ဘဝတွင် လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက်ကာစ်တ်စက်ပစ္စည်း
1. ဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်ခြင်း- ဘူတာရုံပြောင်းခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲထည့်သွင်းခြင်းအချက်ပြခြင်း (SDI၊ HDMI၊ DVI) + DDR ဖိုင် (ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ PPT၊ ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်း)+ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက် ထုတ်လွှင့်မှု (တွန်း၊ ဆွဲထုတ်ခြင်း)+ NDI + SRT၊ ရောနှောထားသော ကူးပြောင်းခြင်း;
2. အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ခြင်း- ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှော + အန်နာရော ရောနှော + အသံ ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ကိရိယာ + ဗီဒီယို နှင့် အသံ ထပ်တူပြုခြင်း ထိန်းညှိမှု
3. မှတ်တမ်းတင်ခြင်း- HD ဗီဒီယို MPEG2+MP4+ တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲအသံဖမ်းယူနစ် (အရန်သိမ်းခြင်း);
4. တိုက်ရိုက်- Http၊ Rtmp၊ NDI၊ SRT;
5. အသံနှင့် ဗီဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေး ထုတ်လွှင့်မှု စနစ်၊
6. လမ်းညွှန်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် TALLY;
7. 64-bit kernel၊ 4K coding၊ Alpha အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှုစနစ်၊ virtual keying စနစ်၊ အသံနှင့် ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်စနစ်၊
9. လျှောက်လွှာ- စတူဒီယို၊ ပညာရေးအသံသွင်းမှု၊ မီဒီယာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ အစည်းအဝေးများနှင့် လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊
10. အရွယ်အစား- 425mm×340mm×120mm;အလေးချိန်:5ကီလိုဂရမ်ခန့်;
1 -4အပိုင်းပိုင်း
Alibaba တွင် KD-LC-8N ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
5 - 49 အပိုင်းပိုင်း
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ ထည့်သွင်းမှု- AC110V-240V,50-60Hz,5A;အထွက်- 12V 25A
Operating အပူချိန် 0-40 ℃
ဗီဒီယိုအထွက် PGM အထွက် HDMIx1;စနစ်များသည် HDMI×1,NDI×1,SRT×6 ကိုပြသသည်။
အသံထွက် RCA×5၊MIC XLR×5 တွင် စတီရီယို(L၊R)
အသံထွက် စတီရီယို(L၊R)ထွက် RCA×1၊Balanced XLR OUT×2၊Monitor3.5×1၊Playback monitor3.5×1၊ဒါရိုက်တာက MIC3.5×2 လို့ခေါ်တယ်။
အခြား interface USB2.0×2၊USB3.0×2၊RJ451000M×1
ဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာတစ်ဦး TALLY MINI XLR OUT×8၊ ဒါရိုက်တာခေါ်ဆိုမှုများ
ရောသမမွှေပါ။ ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်- Signal×4၊NDI×6၊SRT×6၊Stream×6၊DDR×2
အသံချဲ့စက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှောကိရိယာ×၅၊ အင်နာလော့ ရောနှော×၅၊ အော်ဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ကိရိယာ×၂
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ အရည်အသွေးမြင့် ဗီဒီယို MPEG2-HL၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်မီဒီယာ MP4
ထုတ်လွှင့်မှုနှောင့်နှေးခြင်း။ အသံနှင့် ဗီဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု ထုတ်လွှင့်ခြင်းစနစ်;(ပုံမှန်မဟုတ်သော)
စာတန်းထိုး CG-Alpha DVE၊ ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်း၊ Virtual matting စနစ်
ဖွဲ့စည်းမှု Intel i9 CPU9900T၊RAM 16G၊1TB SSD
စနစ် Windows 10
1၊ ဗီဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း- SDI×4၊ HDMI×1၊ DVI×1၊ NDI×6၊ SRT×6၊ Stream×6၊ အထွက်- SDI(ring out)×4၊ HDMI×1၊ NDI×1၊SRT×1 ;
2. Built-in 16-channel HD ရောစပ် အထူးပြုလုပ်ချက်များ ပလပ်ဖောင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ အပြည့်အ၀ ထည့်သွင်းမှု ရောစပ်ထားသော အထူးပြုလုပ်ချက်များ ကူးပြောင်းခြင်း၊ တပ်ဆင်ထားသော ပုံတွင် ပုံပါအတိုင်း မထင်မရှား အနေအထား rocker controller၊ ထုတ်လွှင့်မှု အဆင့်ခလုတ် T-type push rod၊ 4:4 ရရှိသည်-4အရှုံးမရှိခဲယဉ်းဖြတ်တောက်;
3၊ Full HD ရောစပ်ထားသော kernel၊ Full HD ဟာ့ဒ်ဝဲအချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော ကူးပြောင်းခြင်းသည် အဝင်အချက်ပြမှုနှင့် NDI၊ SRT၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ စက်တွင်းပစ္စည်း DDR (ရုပ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ PPT၊ ပြန်ဖွင့်ခြင်း စသည်ဖြင့်) ဖိုင်ပြောင်းခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလည်ပတ်ခြင်း ကုဒ်နံပါတ်တို့ကို သိရှိနိုင်သည် DDR ခေတ္တရပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ ပလေယာပွိုင့်နှင့် နောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်း၏ ရှေ့နှင့်နောက်ကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ချန်နယ်၊ တွန်းစီးဆင်းမှုနှင့် ဆွဲထုတ်ခြင်းမုဒ်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ရာပေါင်းများစွာသော ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းခြင်း အထူးပြုလုပ်ချက်များ၊
4၊ အသံထည့်သွင်းခြင်း- စတီရီယို (ဘယ်၊ ညာ) IN×5;ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မိုက်ခရိုဖုန်း (48V) XLR IN×5;စတီရီယို (ဘယ်၊ ညာ) OUT×1;ဟန်ချက်ညီသော အထွက်အား XLR OUT×2;SDI မြှုပ်သွင်းထားသော အသံ IN×5;ပင်မအထွက်စောင့်ကြည့်ရေး 3.5×1;စောင့်ကြည့်မှု 3.5×1 ကစားပါ။MIC 3.5×2;
5၊ Built-in ဒစ်ဂျစ်တယ် + အန်နာရောနှော ပေါင်းစပ်ထားသော အသံ၊ မြှုပ်သွင်းထားသည့် အသံနှင့် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့် အန်နာလော့အသံ ရောနှောခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး၊ SDI×4 ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ မြှုပ်သွင်းထားသော/မထည့်သွင်းထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်×5၊ အသံချိန်ညှိနိုင်ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ× နှင့် ရောနှောနိုင်သည်။ 5၊ analog စတီရီယို×5၊ MAC XLR×5 နှင့် အခြားသော ပြင်ပထည့်သွင်းမှုအသံ၊ ချိန်ညှိထားသောအသံအား HDMI၊ SDI အထွက်အဖြစ် မြှုပ်နှံထားနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် စတီရီယိုအထွက်သို့ ပိုင်းခြားနိုင်သည်၊ တပ်ဆင်ထားသည့် 48V ဖန်တမ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ စတီရီယို×၁ အထွက်၊ အသံလွှင့်စောင့်ကြည့်မှု 3.5×1၊ လမ်းညွှန်စကားပြော နားကြပ် 3.5×1၊
6. အသံပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်ပြောင်းစက်နှစ်ခုမှတဆင့် တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲအသံနှောင့်နှေးသည့်ကိရိယာ၊ ပထမဦးစွာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့် analog အသံထပ်တူပြုခြင်း၏ထည့်သွင်းမှုကိုရရှိရန်၊ ထို့နောက် တိကျသောအသံနှင့် ဗီဒီယိုထပ်တူကူးမှုအောင်မြင်ရန်၊
7. ကင်မရာ PTZ ထိန်းချုပ်မှု၊ တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲ တုန်ခါမှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ နှင့် ထုတ်လွှင့်မှု ခန်းမ ချဲ့ထွင်မှု ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ကင်မရာ ၈ လုံးကို တွန်း၊ ဆွဲ၊ လှုပ်၊ စောင်း၊ စောင်း၊ကင်မရာရွေးချယ်မှုသော့ ၈ ဖွဲ့၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ဖြတ်လမ်းခလုတ် ၉ ဖွဲ့နှင့် ကင်မရာမီနူး ဆက်တင်ဖြတ်လမ်းခလုတ်များ၊
8. Built-in ဟာ့ဒ်ဝဲ 8-channel လမ်းညွှန်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်နှင့် 8-ချန်နယ်လမ်းညွှန်အချက်ပေးစနစ်၊
9. Built-in CG-Alaph စာတန်းထိုးနှင့် အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှုစနစ်၊ Alaph တက်ကြွသောစာတန်းထိုး၊ ထောင့်အမှတ်အသားနှင့် ပလက်ဖောင်းအမှတ်အသားစသည်ဖြင့် 3D အရာဝတ္ထုများနှင့် အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ တက်ကြွသောပစ္စည်း၊ DVE တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို၊ ဗီဒီယိုပစ္စည်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများ တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်ချခြင်း၏ ဘက်စုံအမြင်အာရုံ ထုပ်ပိုးမှု အောင်မြင်ရန်၊
10. Built-in image keying စနစ်၊ virtual image keying effect ကို hardware rotary encoder ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး virtual composite image ကို t-type damping switch push rod မှတဆင့် အခြားသော အချက်ပြများနှင့် ဖိုင်များနှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အချက်ပြအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ;
11. Built-in ဗီဒီယိုကုဒ်နံပါတ်စနစ်၊ အဆက်မပြတ်ဖရိန်အဆက်မပြတ်ကုဒ် MP4၊ MPEG2-HL 50Mbps/S ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် HD ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ built-in streaming media WMV9၊ H.264 coding စနစ်၊ built-in dual-code stream အသံဖမ်းခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းစနစ်၊ built-in WMS နှင့် FMS ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်နှင့် FMS အသံနှင့် ဗီဒီယို ထပ်တူပြုခြင်း ချိန်ညှိမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
12. ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် အပိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် တပ်ဆင်ထားသော ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ HD အသံဖမ်းစနစ်၊ အသံဖမ်းဖိုင်များသည် ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် MP4 ဖိုင်များကို အဆက်မပြတ်ဘောင်နှင့် အဆက်မပြတ်ကုဒ်ပါရှိသော၊ နှင့် SD ကတ်အပေါက်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
13. Built-in ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် nonlinear တည်းဖြတ်စနစ်;
14. 64 ဘစ်ကုဒ်စနစ်၊ 4K coding core၊ i9 9900TCPU၊ 16G မမ်မိုရီ၊ 1TB အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဒစ်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဝယ်ယူမှုနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအားလုံးကို တစ်ခုတည်းသောစက်၏ 17.3 လက်မ မျက်နှာပြင်၊
15. WIN10 လည်ပတ်မှုစနစ်;
16. စက်ကိရိယာများ၏ ထုထည်နှင့် အလေးချိန်သည် ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများတွင် တင်ဆောင်လာသော လေယာဉ်အိတ်များ၏ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
ယခင်- KD-LC-8M ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တိုက်ရိုက်ကာစ်တ် ဗီဒီယို တိုက်ရိုက် ကာစ်တ်စခန်း
နောက်တစ်ခု: KD-LC-16N ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဘူတာရုံ အိတ်ဆောင်လက်တွေ့ဘဝတွင် လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု စက်ပစ္စည်း
KD-LC-8M ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တိုက်ရိုက် Casting ဗီဒီယို L...
KD-LC-16N ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဘူတာ အိတ်ဆောင် Rea...
KD-LC-16UHN အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်း အိတ်ဆောင် Rea...
+86 13901006840 (WeChat)